Kenlọ ọrụ Pet Pet - China Pet Kennel Manufacturers, Suppliers
N'èzí nnukwu nkịta ígwè ụlọ anụ ụlọ na-agba ọsọ gbakọtara
Nkọwa nkọwa doglọ nkịta na-arụ ọrụ dị nkenke bụ ụlọ a na-azụkọta anụ ụlọ. Enwere ike idobe ya. Ọ kachasị maka nnukwu nkịta, ewu na ọkụkọ. Ọ na-eku ume, na-adigide, na-echekwa, na panel na-abịa tupu-chịkọta. Nkọwapụta Aha Aha tupu akpọkọta Welded Dog Kennel Product Agba Agba ojii ma ọ bụ omenala dị ka Nchọta Kennel gị chọrọ 4ft HX 5fh W; 6ft HX 5 ft W 5ft W x 5ft D x 6ft H 5ft W x 10ft D x 6ft H 10ft W x 10ft D x 6ft H ma ọ bụ omenala dị ka mkpa gị Mkpa: Uwe mkpuchi fini ...
N'èzí Large Chain Link Pet onu ulo maka Pet Run Play 10ft x 10ft x 6ft
Ejupụtara Modular Chain Link Dog Kennel ka nke Metal Pipe na Chain Link Steel. Ọ bụ ụdị nke ulo oru ulo oru ugbo. Dị oke mma maka anụmanụ buru ibu na-anọ n'èzí, ọ na-eku ume, na-adigide ma na-echekwa. Anyanwụ anụ ụlọ, ndị na-ebu ya na ụlọ maka egwuregwu n'èzí anụmanụ. Nkọwapụta Aha aha Modular Chain Link Kennel Pet Kennel Hertlosure Product Agba Silver ma ọ bụ omenala dị ka Nchọpụta Kennel gị 6 ft.hx 5 ft.w, 6 ft.hx 10 ft.w ma ọ bụ omenala Elu: Galvanized mkpuchi Atụmatụ Pract ...
Ejikọtara ọnụ igwe eji eji eji eji eji eji eji eji eji eji ejiji ejiji eji eji eji eji eji eji eji eji eji eji ajzachapu bekee
Nkọwa nkọwa doglọ nkịta na-arụ ọrụ dị nkenke bụ ụlọ a na-azụkọta anụ ụlọ. Enwere ike idobe ya. Ọ kachasị maka nnukwu nkịta, ewu na ọkụkọ. Ọ na-eku ume, na-adigide, na-echekwa, na panel na-abịa tupu-chịkọta. Muliple configures chịkọtara, Nkịta onu melite na-erughị 30 nkeji. Adịchaghị ere ahịa ọkwa nchara, ntụ ntụ na-adịgide adịgide na-echebe megide nchara nchara. Mfe 2-mwekota mgbakọ na enweghị ngwaọrụ dị mkpa 1 na ụkwụ maka nhicha dị mfe. Panel na-kpaliri tupu ntụ ntụ-ntekwasa imecha ...
Largelọ nnukwu nkịta nke oge a nnukwu ụlọ nkịta dị n'èzí nwere akwa nwere ndò
Ihe omuma nke ugbua 6ft x4ft x6ft nnukwu nkịta nkịta nkịta ụlọ nkịta dị n'èzí nwere akwa mkpuchi ụlọ na-adị mfe ịzukọta. O nwere ike inye mmiri ozuzo na anyanwụ maka anu ulo na nwere ike ịbụ ahịa mere. Ọ kachasị maka nnukwu nkịta, ewu na ọkụkọ. Ọ na-eku ume, na-adigide, na-enweghị ikuku. Aha aha Nnukwu nkịta nkịta nkịta nkịta nkịta 6ft x 4ft x 4ft, 6ft x 4ft x 6ft, 6 ft x 4ft x 8ft ma ọ bụ omenala dị iche iche Agba Agba Black ma ọ bụ omenala dị ka Mkpa gị chọrọ: Black (Metal Gray) P .. .
Inogide Chain Link Large Dog ulo nkita kpaliri n'èzí
Detalis Factory Mee N'onwe Gị inogide n'èzí crate nkịta ulo nkita bụ ezigbo maka nnukwu nkịta. Na elu àgwà na inogide ihe, oké ọrụ mgbabere uzo na mfe kpochidoro usoro na-eme ka ọ dị mfe iji. Ọkara yinye njikọ ntupu ụzọ gbochie ụkwụ anụ ụlọ ị jidere. Anu ulo nwere ike buru otu n’ime ihe kachasi nma nye ezi n’ulo obula ma buru uzo oku doro anya iji weta onodu obi uto n’ulo obula. Nkọwapụta Ngwaahịa Aha Nnukwu Ugwu Chain Link Dog Kennel Size 6 ft.hx 5 ft.wx 10ft.d; 6 fthh 10 ft.w x10ft.d ma ọ bụ c ...